Kedu ihe kpatara nri nkịta ji agba agba nri | Martech Zone
Kedu ihe kpatara nri nkịta ji agba agba nri
Saturday, October 28, 2006 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Seth Godin na-ede banyere ndị na-eme ihe nchịkwa na onye ọrụ okike Dilbert Scott Adams na-ede maka ịhịa aka.
Seth kwuru, sị:
Kwa ụbọchị, enwere ọtụtụ narị ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-arụsi ọrụ ike, na-anwa ịchọta etu ị ga-esi gbanye echiche ụlọ ọrụ n'ime sistemụ na-eche na ọ bụ nke ụlọ na nke dị adị.
Seth juru mgbe ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ga-amalite na-emezi mmekọrịta mmadụ na ibe ya… Echere m na ọ nụghị na Katherine Harris anwalela ya site na blọọgụ ya mgbe onye ọrụ kwuru ihe ole na ole mbụ (adreesị IP si n'aka onye amaala na-elele ha anya) .
Ọ bụrụ na enwere nnwere onwe ime nhọrọ, gịnị kpatara ndị isi toro ogologo na ntutu kacha mma ga-eji wee merie ntuli aka?
Ekwetaghị m na ọ bụrụ na ị nụtụla gbasara “okpu ojii” na “okpu ọcha” njikarịcha njin nchọta, mana ọ bụ nkọwapụta zuru oke nke isiokwu a. Black Hat SEO bụ ntinye nke engines ọchụchọ iji nweta ebe site na ụzọ ndị na-abụghị ezigbo. White Hat SEO bụ injinịa nke ọdịnaya iji melite nhazi na Search Enjini iji melite nsonaazụ azụmaahịa. Ebumnuche ha abụọ bụ imeziwanye nnweta ọchụchọ… mana okpu ọcha na-eme ya n'ihi na ha chere na o kwesịrị inwe ebe ka mma.
Nzaghachi m nye ma nyocha Seth na nkọwa Scott bụ na ndị mmadụ, n'ọtụtụ akụkụ, amaghị ihe. Anyị tụkwasịrị obi a ihu, a isi, a ika, okwukwe aka… a na agba. Mmetụta ndị a niile na-akpata mmetụta uche n'ime anyị. Ndị na-ere ahịa nwere olile anya na njikọta nke mmetụta uche ga-eduga anyị ịzụta. Ọ dịkarịghị anyị na-anwa ịrụ ọrụ siri ike iji ghọta ihe. Ọ bụrụ n’ezie ị chọrọ iresị mmadụ ihe nzuzu, gwa ha etu ọ ga-esi -eche, ọ bụghị otú o si arụ ọrụ nke ọma.
Fọdụ ihe atụ ndị ọzọ:
Paris Hilton na-ere hamburgers.
Verizon na-ere 'netwọkụ nke puku puku' ha n'azụ gị (ọ dị m ka ya bụrụ na ha nọ n'azụ ebe kama)
Nascar na-ere UPS Mbupu
Heck, ị nwere ike ibudata egwu kachasị amasị gị na azụmahịa Tide na Saịtị saịtị! Ekwetaghị m? Nke a bụ otu:
[ọdịyo: https: //martech.zone/audio/tidesong.mp3]
Ọ bụ otu ihe mere nri nkịta ji agba agba nri. Nkịta achakwala agba ahụla agba dịka mmadụ si ahụ ya. Agba adịghị agbakwunye ekpomeekpo ma ọ bụ nri. Ọ bụ na ọ bụghị dịka nhịahụ maka ụlọ ọrụ nri nkịta ịgbakwunye agba agba nri nkịta dịka ọ bụ maka ụlọ ọrụ ịtọlite ​​ntinye phony na Digg? Chọpụta na ọ bụ… ma nke bụ eziokwu bụ na ndị mmadụ na-azụ ya n'ihi na ọ 'anya ọma'. Wantsnye chọrọ iwepụta oge iji chọpụta azụ nke ngwugwu maka abụba ọdịnaya, keakamere Efrata, eke Efrata… ọtụtụ n'ime anyị na-adịghị.
Ọ bụrụhaala na enwere uru ịgha ndị mmadụ ma ọ bụ teknụzụ, okpu ojii ahụ ga-adị mgbe niile iji nweta uru na ya.
API…'snye na-ewu APUI?
Nweta nkwalite WordPress na 2.05 na-enweghị messing gị na saịtị!
Ọkt 30, 2006 na 8:36 PM
M ga-azụta hamburger si Paris na nke ahụ bụ nzube nke mgbakwunye, infro mara mma
Feb 13, 2008 na 9:16 PM
nkịta B NOTGH color agba-isi.
Nwere ike ime ka isi okwu gị gosipụta nzuzu gị site n'ikwu na nkịta na-adabere n'echiche ha nke isi, karịa ịhụ ụzọ, yabụ na agba nri bụ naanị ime ka nri ahụ yie ihe dị mma n'anya onye zụrụ ya. Ana m agbali ime nyocha ebe a, mana Intanet abụghị ebe dị mma maka nke ahụ ebe ọ bụ na onye nzuzu ọ bụla nwere ike ide ederede na ntanetị.
Feb 13, 2008 na 11:27 PM
Missed tufuru isi ihe dị na post - nri nkịta adịghị acha maka nkịta ahụ, ọ nwere agba maka mmadụ ịzụta ya. Ee, nkịta nwere ike ịhụ ụfọdụ agba.
Enwere m olileanya na otu ụbọchị, omume gị nwere ike ijide ike gị iji nye nkọwa bara uru.
Daalụ maka ịkwụsị site,